Pakistana: Bilaogin’ny Taom-baovao! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2018 18:23 GMT
Koa satria hifarana ny taona, voatery aho hibanjina ny lasa ary hametraka ity fanontaniana goavana ity amin'ny tenako, “maninona tay aho no tsy nanoratra lahatsoratra ho an'ny GV tamin'ny herinandro?” Azo tsapain-tànana ihany ny valiny; nitsidika ny Firenena Procrasti (tsilalaonteny: “Procrasti Nation”), nosy iray kanto miala ny morontsirak'i Ekoatora aho. Feno olona maha-te ho tia sy tsy maka lagy ao, ary toa haiko ny miara-miaina amin-dry zareo. (Raha ny tena marina, tanatin'ny herinandro iray monja dia very ny “lentilles de contact”-ko sady vaky ny solomasoko, ka tsy nahita tsara aho nandritra ny andro vitsivitsy, ary noho izany, tsy te hisahirana hitsapatsapa ny solosaiko).
Fotoana goavana androany, satria mitondra aminareo ny lahatsoratro farany amin'ity 2005 ity aho. Henoko ianareo miteny hoe … “ny firodanan'ny Rindrin'i Berlin, ny faharavan'ny Firaisambe Sôvietika ary izao dia ity indray!”. Eny, tokony nanolotra fitaterana mivantana ny fanoratako ity lahatsoratra ity ny CNN sy ny Fox News saingy indrisy, tsy maintsy nandrakotra ny fandaharam-potoana amin'ny antsipiriany ny hetsiky ny Filoha nandritra ny fialany sasatra tany amin'ny trano fiompiany any Crawford (Texas), anatin'izany ny fangereny farany tamin'ity taona ity.
Koa, tsy hiandry ela intsony (ny tsy misy), indro atolotro anareo ny angon-dahatsoratro kiritika notsongaina tanatin'ireo bilaogy mba hovakinareo:
Manolotra fanehoankevitra somary mitombona ihany amin'ny toejavatra misy ao Baghdad i Suspect Paki; manome dika hafa an'ny hira fanevam-pirenena Pakistaney (rohy maty) i Windmill; manoratra momba ny Rosa Parks an'i Pakistana (pejy voafafa) i Fountainhead; manazava tantaranà fampijaliana (rohy maty) i Opinionated Voice; manoratra momba ny fanatrehany ny Fivoriambe Hamelomana indray ny Fanahy Islamika i Minigma; ary farany, maneho ny hevitro amin'ny tantara momba ny fitsikilovan'i GW aho.
Alohan'ny hialàko, te hirary soa ireo mpamorona, toniandahatsoratra, mpanoratra ary mpamaky ny Global Voices Online aho mba hanana taona 2006 feno fifaliana. Hanaraka ity taona ho avy ity anie ny fandeferana, ny fifanakalozan-kevitra, ny fahasahiana hiady hevitra momba ny fahefana, ary ny vola mivaingana tsy voaisy marika ho antsika rehetra!